डा. उपेन्द्र देवकोटालाई खुला पत्र !::Nepal's No.1 Genuine Online News Portal
डा. उपेन्द्र देवकोटालाई खुला पत्र !
तपाईँको स्वास्थ्य सुधार र दीर्घ आयुको लागी उनै पशुपति नाथ सँग कामना गर्दछु ।
प्रकाशित मिति - आइतवार, जेष्ठ ६, २०७५
श्रद्धेय वरिष्ठ न्युरोसर्जन डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा ज्यु !
तपाईँको स्वास्थ्य सुधार, दीर्घ जीवनको कामना ! !
मान्छेले तपाईँलाई भगवान् नै सोच्थे । मान्छे भएर अरूलाई जीवन दान दिने व्यक्ति उपेन्द्र देवकोटा आज तपाईँको आफ्नै स्वास्थमा अकल्पनिय तितो दुखद यथार्थ अवस्थाको बारेमा मेरो मनमा उब्जिएको मनको कुरा तरङ्गलाई लिएर एउटा खुला पत्र लेख्दै छु । तपाईँको मुस्कान रुपी हिजोका तस्बिर देख्दा कति खुसी लाग्छ । सत्य र यथार्थवादी बिचार बोकेका चिकित्सक भएर देशको सेवा गर्नु पर्दछ । जनतामा जागरुकता ल्याउनु पर्दछ भन्ने सोच भएको डाक्टर साहेब स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा आफ्नो समयको बर्वादी भएको महसुस गर्नु भयो । संसदको राजनीतिक समयमा बरु हस्पिटलको अप्रेसन थिएटरमा भई दिएको भए कति बिरामीहरूले स्वास्थ्य लाभ पाई सक्थ्यो भनेर आफ्नो अमूल्य समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा समर्पण गर्ने डाक्टर साहेबमा मेरो नमस्कार छ ।
आराम छु ! आराम चाहन्छु ! !
तपाईँको स्वास्थ्य सुधार र दीर्घ आयुको लागी उनै पशुपतिनाथ सँग कामना गर्दछु । म सुन्दै छु तपाईँलाई निको नहुने दुष्मनी रोगले ढाल्दैछ । बेलायतमा उपचार संम्भब नभए पछि अबका दिनहरू आफ्नो परिवार र शुभ चिन्तकहरुका साथ नेपालमा नै मर्छु भनेर फर्कनु भयो रे ! स्वास्थ्य क्षेत्रका सजक सर्जक भएर पनि तपाईँ को स्वास्थ्य वेदनाले आम नेपालीहरूलाई पिडा बोध भएको छ । आखिर म तपाईँको नातेदार पनि होइन । तपाईँ सँग भलाकुसारी पनि भएको छैन । तपाईँको स्वास्थ्य उपचार सेवा पाएको व्यक्ति पनि म होइन । मैले तपाईँको योगदान स्वास्थ्य सेवाको समर्पण सुनेको छु पढेको छु । “तपाईँ नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको धरोहर हो” तर विडम्बना ! स्वास्थ्य आफ्नो बहसमा हुँदैन । आफ्नो शरीरले आफैलाई माया गर्दैन । तपाईँको स्वास्थ्य अवस्थाले आम नेपालीहरूमा दुख तुल्याएको छ । चिकित्सक स्वास्थ्य विज्ञान असफल भएर पनि आत्मविश्वासलाई जित्न सक्यो भने लामो जीवन बाँच्ने धेरै उदाहरणहरू छन् । नेपालीको अथाह माया ममताले तपाईँ अझै बाँच्नु पर्छ । तपाईँलाई मैले यो कुरा भनी रहनु पर्दैन । तपाईँ अरूको जीवन बचाएर नयाँ जीवन दिने मान्छे ! जिन्दगी के हो ? मानिसको चोला के हो ? हरेक मानिसले आफूलाई नपर्दा सम्म सोच्दैनन् । आफ्नो जिन्दगीको अन्तिम घडीको समयलाई कुर्नु पर्दाको पिडा कस्तो होला ? आज औषधी विज्ञानले पूर्णबिराम लगाएर तपाईँ जति दिन बाँच्छु नेपालमा रहेर आफ्नै जिन्दगी भोग्छु भनेर फर्कनु भयो । तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई खुसी र सुखी बनाउन सकिन्छ भने भगवान् समर्पण ! नेपालीहरूको शुभकामना र शुभ आशीर्वाद नै हो । यदि तपाईँ विश्वास गर्नु हुन्छ भने नेपाली प्राकूतिक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य उपचार हुन सक्छ ।
औषधी विज्ञानले मूत्युलाई जित्न सकेमा मानव जीवन कस्तो होला ? पाप र पुण्यको ख्याल नगरी पैसाले बाँच्न सकिने भएमा यो संसारको रीत कस्तो हुने थियो ? जन्मँदै मान्छेले भाग्य र कर्म बोकेर आएका हुन्छन् भन्दछन् । मिति पुगे पछि कसैको केही लाग्दैन भन्छन् । मर्न कसैलाई रहर हुँदैन । मान्छे नमरेको सहर हुँदैन… यो गीतलाई पनि हामीले आत्म साथ गर्नु पर्दछ । हामी सधैँको लागी भनेर जन्मेका हैनौ । खाली हात आएर एक दिन खाली हात जानै पर्दछ । एक दिन ढिलो र चाड मात्र हो । कति मानिसहरू आफ्नो रोगको पहिचान गर्न नसकेर मरेका छन् । रकमको अभावमा अौषधी उपचार गर्न नसकेर लाखौँ मानिसहरू त्यसै मरिरहेका छन् । तपाईँ अरूको जीवन बचाउने मान्छे ! आफ्नो स्वास्थमा भने अनावश्यक विदेशमा स्वास्थ्य उपचार गरी रहनु भन्दा आफ्नै देश फर्कनु भयो । अब कति बाँच्न सकिन्छ भनेर स्वास्थ्य परीक्षण चिकिस्सा प्रणाली बाट मात्र थाहा पाउन्छौ । तपाईँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालको वरिष्ठ डाक्टर भएर पनि आफ्नो रोगमा धेरै ढिला भई सकेको अब केही गर्न नसकिने अवस्थामा आई सक्नु भयो । अबको बाँकी दिन भनेको आफ्नो जीवनको ब्याजको दिन हो ! बोनसको दिन हो । त्यसैले त्यो दिनहरू पक्कै तपाईँको आफ्नो दिन हुने छैन । अब डराएर पनि साध्य छैन । निराश हुनु पर्ने अवस्था छैन । खुसीले बाँच्ने प्रयत्न गरौँ ! तपाईँले हरेस खानु भयो भने चिकिस्सा शास्त्र अौषधी विज्ञानमा नै निराशा छाउने छ । आफ्नै उपचार नहुने विद्याको के अर्थ ?
आज यो देशका प्रधानमन्त्री के पी ओली अौषधी उपचारको चमत्कारले नै बाँचिरहेको छ !छिमेकी राष्ट्र नरेन्द्र मोदीले गरेको नाकाबन्दीको कडा प्रतिकार गरेका के. पी. ओलीले दोस्रो प्रधानमन्त्री कार्यकालमा भारत भ्रमण गर्नुका साथै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि जनकपुर देखि मुक्तिनाथ क्षेत्रको नेपाल भ्रमण गराउन सफल भयो । चुनाव परिणामले ठुलो पार्टी सँग सानो पार्टी मिलाउँदा जुत्ता अनुसार आफ्नो खुट्टा नै काटेर मिलाउन पछि पर्दिन भनेर आज माओवादी संग पार्टी एकता गर्न सफल हुनु भयो । अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुग्न सफल हुनु भएको छ । आखिर गर्न खोजे के नसकिने रहेछ । आत्म विश्वासलाई दरिलो बनाएर आफ्नो जीवनको अन्तिम अवस्थामा देश हितको लागी कुनै कुरा बन्देज हुनु हुँदैन । राष्ट्रिय स्वाभिमान झुक्नु हुँदैन । राष्ट्र हितमा चुक्नु हुँदैन । कोही कसै सँग व्यक्तिगत रिस राग लिनु हुँदैन । देश र जन हितमा आफ्नो स्वार्थ लुक्नु हुँदैन ! यो नै जीवनको अन्तिम अवस्थामा गर्न सक्ने सत्य मार्ग हो ।आखिर मरेर लानु नै के छ र ! को शत्रु को मित्रु आखिर छोडेर जानु छ यो माया मोहको सञ्जाल ! त्यसैले ओली सरकारले केही गरेर देखाउनु छ नेपाल र नेपालीहरूका लागी ! बाँचुन्जेल जीवनमा हरेस खानु हुँदैन ।
उपेन्द्र देवकोटा ज्यु, कुनै दिन आश्चर्यको चमत्कारको खुसीयालीको दिन भएर आउने छ भनेर कामना गरौँ !
पैसा र डाक्टर साहेब भएर पनि मान्छे सधैँ बाँच्न सकिन्दैन भनेर यो सत्य कुरा गरिब जनता आम नेपालीहरूलाई तपाईँले बुझाउनु पर्छ । आफू स्वास्थ्य क्षेत्रमा फर्कन नसके पनि आफ्नो भोगाई जीवनको बारेका आत्मकथा लेख्नु पर्छ । अरूलाई जीवन दिनेले आफ्नो जिन्दगीको साहसताक कथा लेख्नु पर्छ । खरो बोली दूढ विश्वासमा अरूलाई जिउन प्रेरणा दिने, बचाउन सक्ने मान्छे ! तपाईँ सँग हाम्रो देशको कायापटल भएको राजनैतिक तन्त्रको दस्तावेद छ । माओवादी जनयुद्ध देखी राजदरबार हत्याकाण्डको आलो घाउ चिरफार गरेको अनुभव छ । सबुत प्रमाण र सत्य उजाहगरण नभएर नेपालमा जे पनि हुन सक्छ ! जे भए पनि धाकछोप गरेर बिलाउने यस्ता कयौँ घटनाहरु इतिहासको पन्नाहरू शक्तिको कलमले लेखिएका छन् । तपाईँ भीष्म पितामह भएर आज सत्य निष्ठा र कर्मको दिप्य उपदेश ज्ञान सत्यको उजागर निर्भीक भएर खोल्नु हुनेछ । तपाईँले देश र जनताको लागी आफ्नो अमूल्य जीवन भोगाइको आत्मकथा किताब लेख्नु पर्दछ । आत्म बिश्वासी व्यक्ति निडर भएर भगवान् सँग पनि लड्न सक्नु पर्छ । मान्छे कति बाँच्यो त्यो ठुलो कुरा होइन ! उसले बाँचेर अरूका लागी के गर्न सक्यो त्यो ठुलो कुरा हो । यो दुनियाँले उसलाई सम्झने उसको योगदान हो । त्यसैले एक युग मरे पनि इतिहासमा उ कयौँ युग बाँचिरहेको हुन्छ ।
मुत्या देखि टाढा भाग्नु कायर हुँदैनन् रे !
रोग सँग लड्नु तिमी थाक्नु हुँदैनन् रे !
जोस जाँगर आत्म विश्वास सबै तिम्रा लागी !
दैव पनि निहुरिनु पर्छ , तिमीअझै बाँच्नु पर्छ !
दिनेशजी तपाईंको चेतावनीशैलिको सुझाब तपाईंकैलागी घातक हुन सक्छ !
कमरेड प्रचण्ड ज्यु, पाप कहिले धुने ?
ओली सरकारको कार्यक्रमहरू महत्वाकाँक्षी भएपनि आर्थिक फड्को मार्नका लागि आवश्यक छ
प्रधानमन्त्री ओलीले देखेको समृद्धिको सपनामा हामी कहाँ
गरिबको लागि लड़ने कंगालहरु एकाएक कसरी भए धनपति ?
दलालहरुले राजालाई पनि समाप्त पारे, अब देश पनि डुबाउने छन् !